OPPO A53 - Faster and Smoother, Feel The Speed | OPPO မြန်မာ
လျှင်မြန်ခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူ၊ ချောမွေ့ခြင်း
အလွန်လျှင်မြန်သည့် refresh နှုန်း 90Hz ပါရှိကာ ရုပ်ထင်မှန်သားပေါ်တွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာဖြင့် ဗီဒီယိုကြည့်နိုင်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားနိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အပြင် ခေတ်စားလျက်ရှိသည့် နောက်ဆုံး hashtags လုပ်ဆောင်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကို မလွတ်တမ်း စောင့်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တလက်လက်တောက်ပပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ပင်လယ်လှိုင်းများ၏ အသွင်ကိုယူလျက် ပြောင်မြှောက်စွာ ဒီဇိုင်းရေးထွင်းပုံဖော်ထားခြင်းကြောင့် သုံးမြှောင့်ဖန်တုံးမှ ဖြာထွက်လာသည့် ရောင်စဉ်တန်းများပမာ လှပနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အရာရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
ပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာသည့် OPPO A53 သည် ကိုယ်တွယ်အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသောကြောင့် လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကြာရှည်ခံသော 5000mAh ဘက်ထရီလည်း ပါဝင်ပါသည်။
5000mAh ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ထားရှိခြင်း
အရာရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်းအတွက် အမြဲအသင့်ရှိနေခြင်း
အလွန်ဆန့်သည့် ပမာဏဖြစ်သည့် 5000mAh ဘက်ထရီကို လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်သည့် 18W ဖြင့် တွဲဖက်ပေးထားပါသည်။ ဖုန်းကို အချိန်တိုင်း မလွတ်တမ်းအသုံးပြုလိုပါသလား။ ဒီအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ OPPO A53 ကိုအားသွင်းဖို့ အချိန်အများကြီးမလိုအပ်တော့ပါ။
သင်၏စူပါ ပါဝါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း
ဘက်ထရီစားခြင်းကို အထူးသက်သာစေသည့် Power Saving Mode တွင် လျှပ်စစ်ပါဝါကို ဂရစ်လျှပ်စစ်စနစ်မှ တိုက်ရိုက်ရယူပေးနိုင်ပြီး ပါဝါတာရှည်ခံစေရန်အတွက် အိပ်ချိန်တွင် ကွန်ယက်စနစ်အား ပိတ်ထားပေးနိုင်သော Sleep Standby Optimization ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ သင့်ဖုန်းအားလုံးဝ ပြတ်တောက်လုနီးအချိန်တွင်ပင် ဖုန်းကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Lag ဖြစ်ခြင်းကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ
စွမ်းအားမြင့် Octa-core ပရော်ဆက်ဆာကို အသုံးပြုထားသဖြင့် သင်အနှစ်သက်ဆုံး ဗီဒီယိုများအား မျှော်လင့်တကြီး စောင့်စားကြည့်ရှုနေသည့် အချိန်တွင် မည်သည့်အနှောက်အယှက် အဟန့်အတားမျှ ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
256GB အထိ တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း
သင်၏ သောတအာရုံကို ဖန်တီးပေးခြင်း
စတူဒီယို စပီကာ ၂ ခု
စတူဒီယို စပီကာ ၂ ခုကို တပ်ဆင်ပေးထားသောကြောင့် စွမ်းရည်မြင့်ပြီး စိတ်အစုံကို ဖမ်းစားနိုင်မည့် 3D အော်ဒီယို အရည်အသွေးကို ရရှိစေပါသည်။ Dirac မှတဆင့် အလိုအလျောက် အော်ဒီယိုကို ချိန်ညှိပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အကောင်းဆုံးသော တေးဂီတအရည်အသွေးကို စီးမျောခံစားလိုက်ပါ။
မှန်ဘီလူး ၃ ခု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ၃ ဆ
13MP ရှိ ပင်မကင်မရာ၊ 2MP ရှိသည့် အကွာအဝေးကို ချိန်ဆရိုက်ယူနိုင်သော depth ကင်မရာနှင့် 2MP မက်ခရိုမှန်ဘီလူး ပါဝင်သည့်ကင်မရာ စသည့် ကင်မရာ ၃ ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပညာရှင်တစ်ဦးသဖွယ် အံ့မခန်း ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်အသွေးကို ပိုမိုရွှန်းစိုစေသော Dazzle Color mode တွင် အရာဝတ္ထုများ၏ မူလအရောင်အသွေးကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး ပုံရိပ်တိုင်းသည် ရွှန်းစိုတောက်ပ နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်နေရာ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သဘာဝကျကျ ရှေ့ကြည်နောက်ဝါးပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လှပပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အလှဓါတ်ပုံများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ သဘာဝအလှကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း
ပြင်ပရိုက်ကူးရေးလုပ်ဆောင်လျှင်ဖြစ်စေ အခန်းတွင်းရိုက်ကူးရေးဖြစ်စေ သဘာဝကျကျ လှပသည့်ပုံရိပ်များကို ရရှိစေရန် AI နည်းပညာသုံး အလှပြုပြင်ပေးခြင်းက သင့်ပင်ကိုယ်အလှနှင့် ကိုယ်ညီအောင် အသေးစိတ်ပုံဖော်ပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
သင့် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေမည့် စစ်ထုတ်နိုင်သည့် မှန်ဘီလူး
လုပ်ဆောင်မှုမျိုးစုံကို ပိုမိုချဲ့ထွင်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် စစ်ထုတ်နိုင်သည့် မှန်ဘီလူး ၁၅ ခု ပါဝင်ပါသည်။ မှန်ဘီလူး တစ်ခုချင်းစီမှ မတူညီသော အခြေအနေ၊ စတိုင်နှင့် စိတ်ခံစားချက်စသည်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အရာမျှ လစ်ဟာသွားခြင်းမရှိသည့် အသေးစိပ်ကျမှု
4cm အကွာအဝေးအတွင်း အနီးကပ်ရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် သေးငယ်သော မိုက်ခရိုကမာ္ဘငယ်လေးအတွင်း စွန့်စားရှာဖွေ၍ ထူးခြားဆန်းပြားလှပမှုတို့ကို သက်သေထူလိုက်ပါ။
သင့်အတွက် စမတ်ကျကျနှင့် အလိုက်သိသော အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးကဲ့သို့ အနားတွင် အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးထက်ပိုသော အသုံးပြုခြင်း (Multi-user) လုပ်ဆောင်ချက်၊ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်အောင် အိုင်ကွန်များကို ဆွဲချုံ့ပးနိုင်သည့် Pull-down Gesture စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တို့က သင့်၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် အကူအညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက်ပိုသော အသုံးပြုခြင်း
ပိုမိုလွတ်လပ်သော နေရာများအား ထားရှိချန်လှပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း။
လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်အောင် အိုင်ကွန် များကို ဆွဲချုံ့ပေးနိုင်သည့် Pull-down Gesture
အိုင်ကွန်များကို ဆွဲချုံ့ပေးနိုင်ခြင်း၊ လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
ColorOS 7.2 အကြောင်း
1. ပုံသေအားဖြင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တစ်စက္ကန့်အတွင်း ပုံရိပ်သစ်များပြသနိုင်သည့်နှုန်း (screen refresh rate) သည် လုပ်ဆောင်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်၍ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Setting အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ Auto Select ၊ 90Hz သို့မဟုတ် 60Hz စသည်တို့ကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
2. ပုံမှန်ဘက်ထရီ၏ ဆန့်နိုင်သည့် ပမာဏမှာ5000mAh ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ဆန့်နိုင်သည့် ပမာဏမှာ 4890mAh ဖြစ်သည်။
3. ကဒ် ၃ ထည့်နိုင်သည့် slot 3-Card Slot (Dual SIM + MicaroSD) ပါဝင်သည့်အတွက် သိမ်းဆည်းနိုင်မှု storage ကို 256GB အထိချဲ့နိုင်ပါသည်။
4. ရှေ့ဆယ်ဖီကင်မရာသည် မတူညီသော မျက်နှာလေးခုကို မှတ်သား၍ အလှပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။
5. ဓါတ်ပုံများသည် ကိုးကားရန် အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ထွက်ပေါ်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းကိုသာ ကိုးကားပါရန်။
6. ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားလုံးသည် OPPO မှ သတ်မှတ်ထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုင်းတာရေးစံညွန်းများ၊ စမ်းသပ်ခန်းများအတွင်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများထံများထံမှ ရရှိသော အချက်အလက်များ စသည်တို့မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့အခြေအနေတွင် ထိုအချက်အလက်များသည် ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်း၊ စမ်းသပ်ချက်ပြုလုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနှင့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။